Ucwaningo Olungcono, Imiphumela Engcono: Ipulatifomu ye-ResearchTech Yenza | Martech Zone
Yenza indlela iyipulatifomu yezocwaningo yemakethe ezenzakalelayo futhi ingenye yedlanzana kuphela emhlabeni jikelele elenzelwe ngokukhethekile ukwenza yonke inqubo yocwaningo.
Ipulatifomu yenza kube lula futhi kusheshe ukuthi izinkampani zikwazi ukuthola imininingwane ebalulekile yabathengi kuzo zonke izigaba zokuthuthukiswa komkhiqizo nenqubo yokumaketha ukuze kuthathwe izinqumo zebhizinisi ezingcono. Ukuthatha igxathu eliya phambili, i-Methodify yakhelwe ukwenziwa ngezifiso, inikeze izinkampani impendulo yabathengi kunoma yiluphi uhlobo lomkhiqizo, ukumaketha noma umbuzo wokuhlangenwe nakho - ngisho nalezo abangakacabangi ngazo okwamanje.
Yenza indlela wakhulelwa ngenkathi kwenziwa ukuhlolwa komqondo okuphindaphindiwe nebhange elikhulu laseCanada. Ithimba le-Methodify libhekane nenselelo yokubasiza benze ucwaningo oluningi lwabathengi ngenkathi beletha impendulo esezingeni eliphezulu ngokushesha okukhulu.
Ibhange lalibhekene nezinkinga ezijwayele amabhizinisi namuhla-isikhathi esinqunyiwe sokuguqula imikhiqizo nemikhankaso, izinsizakusebenza ezimbalwa zokusebenzisana nokuncishiswa kwesabelomali esikhulu. Ngenkathi befuna ukufaka imininingwane eminingi yamakhasimende kaningi kunqubo yabo, bebazi nomqondo wendabuko, ukukhangisa kanye nokuhlolwa kokuklanywa kwephakeji kubandakanya izifundo ezinde, eziyinkimbinkimbi zocwaningo ezingancipha futhi zibize.
Masibeke umongo maqondana nalokhu: izinhlangano zifuna izinqumo eziningi zisekelwe yidatha, zifaka ingcindezi enkulu emaqenjini abo ocwaningo angasebenzi nabacwaningi bedatha. Futhi siyazi ukubeka wonke umthwalo wenhlangano kwabambalwa kubasebenzi kuyindlela yenhlekelele.
Lokhu-ke kuholela ekutheni amaqembu wokumaketha athathe izinqamuleli futhi asebenzise amathuluzi okucwaninga njengama-Facebook polls ukuthola impendulo yamakhasimende. Lezi zindlela ze-DIY zivame ukufaka izinhlolovo ezingezona ezesayensi, ezibukela phansi izindlela zokucwaninga ezifakazelwe, zinganaki izindlela zabantu kanye nokwandisa ubungozi bokuchema kanye nemibuzo eholayo.
Esikhundleni sokuzama ukweqa izindlela zocwaningo lwesayensi, iMethize ifuna ukusiza imikhiqizo ukuthi igxile emizamweni yayo ekubandakanyeni abathengi bayo kuyo yonke inqubo yokuthuthukisa umkhiqizo kanye nenqubo yokumaketha.
Ukubhekana nalezi zinselelo, Yenza indlela yakhelwe ukuba yipulatifomu:
Ivumela abathengisi ukuthi bahlole kusenesikhathi futhi kaningi (ukusebenzisa indlela yokuhlola nokufunda eletha imiphumela esheshayo — hhayi ukulinda ukudalulwa okukhulu kwenyanga kamuva);
Kuletha ikhasimende engxoxweni kuzo zonke izigaba zokuthuthukiswa komkhiqizo nokumaketha;
Kubeka ubulukhuni ngenqubo yocwaningo.
Indlela yokwenza kanjani ukufeza izinhloso zokhiye
Ukunikeza amandla okuhlola kaningi, Yenza indlela yakhiwe ezungeze ifilosofi ye-agile. Kumgogodla we-Methodify kuqinisekisa imiphumela yocwaningo olusheshayo lokujika ngenani lentengo elisebenzayo. Izindlela zenkampani ziletha i-ROI engcono yabathengisi kanye namaqembu wokuqonda, ibanikeze ngempendulo eqhubekayo yabathengi ngokuhlola okufushane, kwemizuzu emi-5 kuya kweyi-10 ngemizuzu yocwaningo lwendabuko lwemizuzu engama-45 oluthatha amasonto ukuthola imiphumela.
Ukubeka ubulukhuni ngenqubo yocwaningo, bona ibhokisi elimnyama izindlela ezifakazelwe ezibhalwe ngabaphenyi abagunyaziwe. Indlela imibuzo ebuzwa ngayo, ukulandelana kwayo; akekho ongashintsha leyo ndlela. Lokhu kuqinisekisa ukulinganiswa kwama-algorithm nokuhlala kuhambisana. Kodwa-ke, umkhiqizo ungacela ukuvula nokuguqula indlela yokusebenza, kwakheke indlela entsha yenethiwekhi endaweni yesikhulumi. Umkhiqizo kuphela okwazi ukufinyelela le ndlela entsha.
Isifundo se-Methodify Case
Omunye wemikhiqizo ye-whiskey ethengiswa kakhulu eCanada, I-JP Wiser's, ekhiqizwa yiCorby Spirit and Wine Limited, esetshenziswa iMethizaify ukusiza ukuklama nokucwenga omunye wemikhankaso eyenzelwe abantu ngokweqile eyake yasungulwa embonini yotshwala - Hold it High, eyanikeza abantu ithuba lokugcobana ngendlela enkulu .
Ekuqaleni kokuhlelwa komkhankaso, uJP Wiser's wasungula iqembu elalibandakanya abalingani be-ejensi abavela emikhakheni ehlukene futhi-intambo eboshwe ngenqubo yokuhlela umkhankaso-ipulatifomu yabo yokuhlola nokwenza kahle, i-Methodify.
Ekugcineni, lo mkhiqizo wawufuna ukukhuthaza abantu baseCanada ezweni lonke ukuthi babeke isikhathi esifanayo nokunakekela ebunganeni babo njengoba befaka i-whisky yabo. Ukuze benze lokhu, ithimba labo le-ejensi lisungule umqondo wokukhiqiza umkhankaso wokuqala ngokuphelele owenziwe ngumsebenzisi weJP Wiser's, unikeze abathengi ithuba lokugcoba obala abangane babo esidlangalaleni kumabhodi amakhulu, emsakazweni nasezinkundleni zokuxhumana. Bengazi ukuthi hlobo luni lwama-toast abazoluthola nokuthi yiziphi iziteshi zokuxhumana kahle ngalokhu, basebenzisana ne-Methodify ukwenza ukuhlolwa nokwenza kahle okuzoqinisekisa ukuthi umkhankaso uyimpumelelo. Ngokusebenzisa iMethifyify ukuletha izwi labathengi kaningi kukho konke ukuthuthuka, lo mkhankaso ekugcineni waba yenzelwe abathengi, ngabathengi.
Njengoba imiphumela ingalethwa kungakapheli izinsuku eziyi-1-2, umlingani ngamunye we-ejensi ukwazile ukuhlanganisa impendulo yabathengi ngokushesha ezinhlelweni zabo. Esikhundleni sokuvimba ukuthuthukiswa kokudala, ucwaningo esikhundleni salokho lwasebenza njenge-accelerator.
Ukuhlolwa Kwezimakethe Kufakiwe
Ukuhlolwa Kwendawo: Kuhlolwe izindawo ezahlukahlukene zokudala ukuthola ukuthi ikuphi ukuqondana okuzwakala kakhulu ngemakethe okuqondiwe kuyo
Ukuhlolwa Kokusetshenziswa Kwamasu: Kuhlolwe ukuthi imaphi amaqhinga asendaweni ewinile ayefunwa kakhulu yilitshe, kuzo zombili iziNgisi nesiFulentshi.
Kusetshenziswa ipulatifomu ye-agile efana ne- Yenza indlela ukwenza izinqumo kuyo yonke inqubo yokumaketha kunikeze ithimba lezokumaketha le-JP Wiser imininingwane okungenzeka ukuthi alizange lihlole abathengi ngenye indlela. Isibonelo, bebengeke bavivinye izindawo zomqondo ngaphambi kokubandakanya inkundla yokucwaninga emakethe, kepha lokhu kubonakale kubalulekile njengoba abathathi bezinqumo abaphambili eCorby behlukaniswe ezindaweni zokuqala ezethulwe. Iphinde yasiza ukubeka phambili amaqhinga aku-inthanethi, angaxhunyiwe ku-inthanethi nawokuhlangenwe nakho asetshenziswe emkhankasweni ngokususelwa empendulweni yabathengi.
Umkhankaso kanye nomkhiqizo kubonwe izitayela zokukhula ezinamandla ngenxa yalokho, kepha imiphumela ebaluleke kakhulu ivela ezindabeni zomuntu kanye nomthelela lo mkhiqizo onawo ebudlelwaneni babantu. Kusuka esiphakamisweni esibhodini lezikhangiso eToronto kuya ku-toast ephilayo yomngcele wobungani baseMelika neCanada, okubandakanya abantu abangama-50 ezinhlangothini zombili zomngcele eDetroit, eMichigan naseWindsor, e-Ontario, ikhaya le-distillery kaJP Wiser's.
Kunezindawo ezine lapho i-Methodify ime ngaphandle kwabaqhudelana nabo:
Kunesidingo esicacile seplatifomu yocwaningo eku-inthanethi enikela ngezinga elifanayo lokuqina njengokuqoqwa kwedatha yangokwezifiso ngenkathi iphinde inikeze isikhombimsebenzisi esibonakalayo esisebenziseka kalula njengezixazululo eziningi zanamuhla ze-DIY.
Amandla okwenza ngokwezifiso ipulatifomu yezinkampani;
Njengomunye wabangeneli bokuqala emakethe ezisebenzelayo, iMethayify ibeka amazinga futhi ivuselele ikusasa locwaningo oluzenzakalelayo lwemakethe;
Uhlu lozalo lweminyaka engama-20 embonini phakathi kwenkampani ephethe iMethisisify, iDelvinia, ne-AskingCanadians, iphaneli layo lokuqoqa idatha online;
Ukuzibophezela ekucwaningeni nasekuthuthukiseni ukuqhubeka nokwenza izinto ezintsha ngokusebenzisa inkampani yabazali, UDelvinia.
Ulungele ukufunda kabanzi?
Bhalisela i-Methodify Demo
Tags: ibhangeBMOfintechucwaningo lwe-fintechjd uhlakaniphileipulatifomu yocwaningo emaketheyenzaucwaningoucwaningo